Xisbiga M oo qaatey siyaasaddiisii abid ugu adkeyd ee soogalootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga M oo qaatey siyaasaddiisii abid ugu adkeyd ee soogalootiga
La daabacay måndag 16 oktober 2017 kl 10.03
Xisbiga Modaraad-ka oo xoog u adkeynaya siyaasadihiisa soogalootiga.
Shirweynaha xisbiga Moderat-ka ee Örebro. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Xisbiga Modaraad-ka ayaa maalintii axadda waxay shirweynahoodii xisbiga ku go’aamiyeen siyaasaddooda cusub ee dhanka soogalootiga, go’aamada ay qaateena waa kuwii abid ugu ad-adkaa ee xisbigasi dhankaas ka qaato.
Fredrik Furtenbach oo idaacadda Sweden uga faalooda dhanka siyaasadda arrimaha gudaha ayaa sheegey in gabi ahaanba ay isbadashey siyaasadda xisbiga Modaraad-ku, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Xisbiga Modaraad-ku xaalad xun ayuu xilligaan ku sugan yahay marka la eego ra’yiga ay dadweynuhu ka qabaan. Xisbiga Modaraad-ku wuxuu rucle ugu jiraa sidii uu dib ugu soo ceshan lahaa taageerayaal badan oo xisbiga uga jabey dhanka xisbiga Sverigedemoquraadi-ga, Waxaana dhawaan la galayaa sanadka 2018 oo ah sanad doorasho, ayuu yiri Fredrik Furtenbach oo idaacadda Sweden uga faalooda siyaasadda gudaha.
Fredrik Furtenbach ayaa intaas ku darey in xisbiga Modaraad-ku maadaama uu garabka middig imminka siyaasad ahaan u siqey laga yaabo in uu dhumiyo taageerayaal badan oo aaminsan afkaaro dhedhexaad ah ayuu yiri Fredrik Furtenbach oo idaacadda Sweden uga faalooda dhanka siyaasadda arrimaha gudaha.
- Xisbiga ayaa go’aansadey in dhalashada dalkaan qofka lagala noqon karo sida tusaale ahaan markii lagu helo in uu been sheegey ama uu dabiya xoog leh dalkaan gudihiisa ku galey, arrinkaan fulintiisana waxaa khasab ah in dastuurka dalkaan wax laga badalo.
-Dadka ku biira ururada argagixisada oo dhalashada dalkaan lagala noqdo.
- Nidaamka dadka soo galootiga ah xaqqa u siinaya in ay dalkaan magangalyo ka dalbadaan , in la badalo oo lagu badalo in dalkaani qaxootiga uu soo qaadanayaa ay noqdaan kuwa uga soo aada saami qeybsiga qaxootiga ee ay kala qaataan dalalka midowga yurub ama dalalka horumarey ee reer galbeedka.
- Dalalka midowga yurub waa in ay kala qeybsadaan qaxootiga ay soo qaadanayaan, dadka magangalyada yurub weydiisanayaana waa in ay codsiyadooda ka soo dalbadaan dalal dibadda ka ah midowga Yurub.
- In la joogteeyo habka ah in sharciyada dalkaani uu siiyo soogalootiga ay noqdaan oo kaliya sharciyo ku meel gaar ah oo aan joogto aheyn, sharciga daganaashahana dalkaan in loo joogteeyo oo kaliya kuwa shaqeysta oo noloshooda dabara.
-in la xoojiyo shuruudaha lagu xiro dadka ehelkooda dibadda looga keenayo laguna saleeyo dakhliga qofkaas shaqada uu hayo ka soo gala.
- Dadka magangalyo doonka ah in lagu khasbo in ay ku noolaadaan xerooyinka ay hey'adda socdaalku dajisey.
- Sharci in laga dhigo in qofka magangalyo doonka ahi keeno caddeyn waafi ah oo ku saabsan qofka uu yahay.
- In dabagalo iyo baaritaano xoog leh lagu sameeyo dadka dalkaaan ku dhuumaaleysta ka dib markii sharciga dalkaan loo diidey, ciidama boolis ah oo aad u farabadana dalkaan loo qoro si ay baaritaano xoog leh ugu sameeyaan dadka soogalootiga ah.
- Degmooyinka dalkaan in laga mamnuuco in ay taageero ridda dheer u fidiyaan soogaalootiga dalkaan sharci darrada ku jooga.
-Qofkii dalkaan sharci looga diido ayaa hadda ka hor sharciga dalkaani wuxuu ahaa in qofkaasi afar sano ka dib mar labaad uu magangalyo dalkaan ka dalban karo, xisbiga Modaraad-ka ayaa raba in muddadaas la kordhiyo lagana dhigo ilaa iyo toban sano.
- In shuruudo xoog leh lagu soo rogo dadka dhalashada dalkaan ka dalbanaya sida tusaale ahaan luqadda iyo taariikhda dalkaan oo uu qofku aad u yaqaan, intixaana dhankaas looga qaado iyo waliba in uu heysto shaqo uu isku dabari karo nolol ahaan.
- Xisbiga ayaa sidoo kale isla gartey in gabi ahaanba dalkaan laga mamnuuco tuugsiga dariiqyada laga tuugsado.
-Xisbiga Modaraad-ka ayaa raba in ay doorashada soo socota ee 2018-ka ay ku galaan iyagoo yareynaya lacagaha ceyrta , iyagoo canshuurta dhimaya, iyagoo difaaca dalkaan xoojinaya iyo iyagoo awoodooda oo dhan isugu geynaya sidii ay danbiyada dalkaan ka dhaca uga hortagi lahaayeen.
Xubnaha kala duwan ee xisbiga Modaraad-ka shirkaas ay magaalada Örebro ku qabsadeen uga qeybgaley ayaa weydiimo laga qaadey waxay muujiyeen in badankoodu ay aad ula dhacsan yihiin , una taageersan yihiin siyasadahaan cusub ee uu xisbigoodu ku sii adkeynayo siyaasadihiisa ku wajahan dhanka soogalootiga.
Dhanka kale xisbiga Madaraad-ka ayaa kor u qaadaya miisaaniyada ciidamada gaashaandhigga dalkaan iyo isagoo waliba hirgalin doona hab cusub oo ku saabsan shaqada qaran ee dhallinyaradu uga qeyb qaataan ciidamada qalabka sida ee dalkaan.
Xisbiga ayaa raba in ilaa 10 000 oo askar boolis ah dalkaan loo qoro ilaa iyo inta laga gaarayo sanadka 2025-ka.
Xisbiga Modaraadka ayaa waxaa ka go'an in la laba jibaaro xarigga iyo xabsiyada lagu xukumo dadka burcad ahaan isugu xiran ee dalkaan Sweden danbiyada ka geysta, in la kordhiyo ciqaabta lagu xukumo dadka guryaha jabsada iyo kuwa faraxumeynta galmo ku kaca.
Xisbiga Madaraad-ka ayaa sidoo kale raba in canshuuraha uu ka dhimo dadka hawlgabka ah.